အရှင်ဥတ္တမ တရားတော်အပိုင်း-၁ (Tayartaw - AOTM 1) 1.2 APK Download - Android Music & Audio Apps
APK Downloader Apps Music & Audio အရှင်ဥတ္တမ တရားတော်အပိုင်း-၁ (Tayartaw - AOTM 1) 1.2
အရှင်ဥတ္တမ တရားတော်အပိုင်း-၁ (Tayartaw - AOTM 1) 1.2 APK
1.2 / December 28, 2018
Yaw Na Than
အရှင်ဥတ္တမဆရာတော်ဘုရား၏တရားတော်များ အပိုင်း ၁ ၁။အကောင်းဆုံးရှင်သန်နေထိုင်ခြင်း ၂။ နန္ဒကောဝါဒသုတ္ထန် ၃။ မဟာသုတသောမဇာတ်၎။ စိတ္တသမ္ဘူတဇာတ် ၅။ အကိတ္တိဇာတ် ၆။ စိတ်အကြောင်းအပိုင်း (၁) ၇။စိတ်အကြောင်းအပိုင်း (၂) ၈။ စိတ်အကြောင်းအပိုင်း (၃) ၉။စိတ်အကြောင်းအပိုင်း (၄) ၁၀။ စိတ်အကြောင်းအပိုင်း (၅) အရှငျဥတ်တမဆရာတျောဘုရား၏ Lecture Part 1 1. Living in the best survival 2.Nanda policy Proverbs Thang 3. Greater knowledge of the film 4.Absolutely contextual Abu Theater 5. ကိတ် film 6. (Part 1) 7. (Part2) 8. (Part 3) 9. (Part 4) 10. (Part 5)
App Information အရှင်ဥတ္တမ တရားတော်အပိုင်း-၁ (Tayartaw - AOTM 1)
အရှင်ဥတ္တမ တရားတော်အပိုင်း-၁ (Tayartaw - AOTM 1)
Yaw Na Than Show More...
Myanmar ThinGyan Songs 1.0 APK
ယခုလာမယ့်သင်္ကြန်အတွက် Myanmar ThanGyan Songs 2018 Applicationကိုတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။အသုံးပြုမယ့်သူများအဆင်ပြေစေရန်ပုံစံအသစ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
ရွှေပေါက်ပင်ကျင့်စဉ် (Shwe Pauk Pim Kyint Sin) 4.5 APK
ပြည်မြို့ရွှေပေါက်ပင်တောရကျောင်းတိုက် ဆရာတေ်ာ သဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇဘဒ္ဒန္တသောမာစာရ မှကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံ၍ရရှိထားသောကျင့်စဉ်ကျင့်မြတ်ဖြစ်သောကြောင့်ပုတီးစိတ်သူများအတွက်အသုံးဝင်ပြီးအမှန်တကယ်ထိရောက်စွာအကျိုးရှိစေမည့်ကျင့်စဉ်Application လေးဖြစ်ပါသည်။ Prome shrubs တောရကြောငျး ဆရာတေ clearlyသဒ် ဒမ် Toro consists of Bhaddanta ways, because it is better to dothe works obtained. Rosary Useful actually works effectivelybenefit applications.
အရှင်ဆေကိန္ဒ တရားတော် အပိုင်း-၁ (Tayartaw - ASKN 1) 1.2 APK
ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ ဆရာတော်ဘုရား၏တရားတော်များ အပိုင်း ၁ ၁။အတွေးအခေါ်နှင့်အတွေ့အကြုံ ၂။ ချစ်တတ်သူများရဲ့ကိုယ်စား ၃။ ကုသိနာရုံ၎။ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာပြန်အလာ ၅။ ကိုယ့်ဟာမှမဟုတ်တာ ၆။သူမသိလည်းကိုယ်သိပါတယ် ၇။ မြင်လျှက်မမြင် ၈။ ဒီလိုပဲနေမယ် ၉။လွယ်လွယ်လေးပါ ၁၀။ မဖြစ်လောက်ပါဘူး ဒေါကျတာအရှငျဆကေိန်ဒ ဆရာတျောဘုရား၏Lecture Part 1 1. Philosophy and experience 2. On behalfခဈြတတျသူမြား 3. Sinai 4. Just come back to their villages 5. Tryforum 6. Unknowing 7. Never been seen 8. stay the same 9. easy 10.Is not enough
အပိုင်း-၃ အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသတရားတော် Tayartaw-ANMB3 4.2 APK
အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသဆရာတော်ဘုရား၏တရားတော်များ အပိုင်း ၃ ၁။သုံးခြင်းနှင့်ဆုံးခြင်း ၂။ ဘဝရိက္ခာတရားတော် ၃။အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ရှိသူ ၄။ လူကြီးရွေးပွဲ ၅။လုပ်မိတဲ့အမှားဖယ်ရှားခြင်း ၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဘဝနှင့်ဝါဆိုလပြည့်နေ့အမှတ်တရ၇။ လူကဲခတ်နည်းအကြောင်း ၈။ ရွှေတနေ့ငွေတနေ့လူဘဝ၏အချိုးအကွေ့အကြောင်း ၉။သာမာဝတီ၏ဘဝနှင့်သင်ခန်းစာ ၁၀။ မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာနှင့်စကြာဝဠာ
အပိုင်း၁၆ အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသတရားတော်Tayartaw-ANMB16 1.2 APK
အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသဆရာတော်ဘုရား၏တရားတော်များ အပိုင်း ၁၆၁။အာနာပါနဿတိသုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း(၁)၂။အာနာပါနဿတိသုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း(၂)၃။အာနာပါနဿတိသုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း(၃)၄။အာနာပါနဿတိသုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း(၄)၅။အာနာပါနဿတိသုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း(၅) ၆။ အာမခံသူမရှိတဲ့အရာများ၇။သမထပုဗ္ဗင်္ဂမဝိပဿနာ ၈။ လူဆိုးလူမိုက် ၉။ မဟာဒါန၁၀။ပြစ်မှားခြင်းနှင့်ဒဏ်သင့်ခြင်း အရှငျနန်ဒမာလာဘိဝံသဆရာတျောဘုရား၏Lecture Part 16 1. Wipe out breathing problems Summary(Part 1) 2.Wipe out breathing problems Summary (Part 2) 3. Wipe outbreathingproblems Summary (Part 3) 4. Wipe out breathing problemsSummary(Part 4) 5. Wipe out breathing problems Summary (Part 5) 6.Itemswith no insurance 7. Benjamin getting ပုဗ် flood Insight 8.thugs9. Great Charity 10. Sins and affected
အတွဲ (၇) ၅၅၀ နိပါတ်တော် (550 Nipattaw No_7) 1.2 APK
၅၅၀နိပါတ်တော် အတွဲ ၇ ဘုရားအလောင်း ပညာရှိများအကြောင်းနှင့်အစွဲအလမ်းကြီးသူများ ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း (၁၈)ပုဒ်ပါဝင်ပါသည်။Onlineအသုံးပြုစရာမလိုပဲ အလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။About 550 pairs ofနိပါတျတျော7Accommodation wise and obsessedဇာတျဝတ်ထု (18)consists of tracks without having to use .Onlineeasily read.
အပိုင်း-၄ ဦးဇဠိလ(ကြာနီကန်)တရားတော် Tayartaw-UZNL4 1.0 APK
ဦးဇဠိလ(ကြာနီကန်)ဆရာတော်ဘုရား၏တရားတော်များ အပိုင်း ၄၁။ကျောင်းအစ်မကြီးဝိသာခ ၂။ အလှ၏နိဂုံး ၃။ မကုန်သောမေတ္တာ ၄။မာယာပြိုင်၅။ လူမိုက် လမ်းဆုံး ဒုက္ခတုံး ၆။ ပျော်ချင်သူ လူအများလိုက်ကြမလား ၇။ဘုရားလူကြီးများ နတ်ပြည်သွား ၈။ အလှူပေး သူဋ္ဌေးဖြစ် ၉။သတ်သော်မသေသေသော်မသတ် ၁၀။ သန္တတိအမတ်ကြီး (H ဠိ ကွာနီကနျ)ဆရာတျောဘုရား၏ LecturePart ' 1. The image of the school, 2. Very lowဂုံး 3. Do you love4. Maya race 5. At the end of suffering foolsblocks 6. Whether thepeople who want to dissolve 7. Adultsperiodical 8. အလှူပေး သူဋ်Htay 9. And he did not die 10. DEC below
အတွဲ (၂) ၅၅၀ နိပါတ်တော် (550 Nipattaw No_2) 1.2 APK
၅၅၀ နိပါတ်တော် အတွဲ ၂ သိကြားမင်း၏ခွေးနက်ကြီးနှင့်အခြားဝတ္ထုများဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း (၂၀) ပုဒ်ပါဝင်ပါသည်။မဖတ်ရှုရသေးသောသူများလဲဖတ်ရှုနိုင်သလိုကလေးငယ်များကိုလည်းညအိပ်ရာဝင်ပုံပြင်သဖွယ်ပြောပြဖတ်ပြနိုင်ပါသည်။online အသုံးပြုစရာမလိုပဲ အလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
MPT Lo Ta Ya-သတင်း၊ ဂိမ်း၊ ဗေဒင်များကို ဒေတာအခမဲ့ 2.8.0 APK
လူကြီးမင်းတို့ ၏ နေ့ စဉ်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် လိုတရအက်ပလီကေးရှင်းကို အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်မှ ရယူထားသော ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်းသတင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖျော်ဖြေရေး၊လူနေမှုဘ၀ အကြောင်းအရာများသာမက နည်းပညာသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ လိုတရအက်ပလီကေးရှင်း၏ သတင်းစာမျက်နှာမှတစ်ဆင့်ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့နှင့် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သောလွယ်ကူရိုးရှင်းသည့် လိုတရဂိမ်းများကို လူကြီးမင်းတို့၏ ပျင်းရိဖွယ်ရာအချိန်များကို ကုန်ဆုံးရန် ၀င်ရောက်ကစားနိုင်ပြီး ပေါ်ပြူလာဖြစ်သောဂိမ်းများအကြောင်းကိုလဲ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် MPT အသုံးပြုသည့်လူကြီးမင်းများအနေနှင့် MPT၏ ခေါ်သူနားဆင်တေးသံစဉ် နှင့်တခြားအပိုထပ်ဆောင်း ၀န်ဆောင်မှုများဝယ်ယူခြင်းဖုန်းဘေလ်နှင့်ပွိုင့်များ စစ်ခြင်း ဖုန်းဘေလ်ထည့်ခြင်းများကိုလိုတရအက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ လိုတရအက်ပလီကေးရှင်းကို MPT ကွန်ယက်ဖြင့်ဒေတာအခမဲ့ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒေတာကုန်ကျမှာကို စိတ်ပူစရာမလိုပဲအချိန်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ လိုတရအက်ပလီကေးရှင်းကိုခုပဲအသုံးပြုလိုက်ပါ။ ၀က်ဘ်ဆိုက်: https//:lotaya.mpt.com.mm လိုတရFacebook Page: https://www.facebook.com/lotayaportal/ It seems tome that in order to fulfill the needs of daily လိုတရ Actionpreparedanew application once again. The media were collectedfrom more than thirty popular Latest News, political, Business,entertainment,0topics of living and technology news in real timeလိုတရ Action News of the application will be able to read through.You are familiar with the ease and simplicity of လိုတရ games untilthe end of time are likely to see your lazy0Reading can playpopular games. In addition, MPT You may wish to use MPT to listento music and other additional services0phone bills and purchasingPoints through phone ဘလျေ လိုတရ available via an application.လိုတရ an application used for free by the MPT network data. Thecost data anywhere, anytime without having to worry လိုတရ using anapplication thing.0Web site: https //: lotaya.mpt.com.mm လိုတရFacebook Page: https://www.facebook.com/lotayaportal/
Grammar Master 19 APK
မင်္ဂလာပါဗျာ..ဒီ app ကတော့ အင်္ဂသဒ္ဒါအခြခံကနေ..Intermediate Levelအဆင့်ထိလေ့လာချင်သူတွေအတွက် စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်..ဒီ app ထဲမှာပါတဲ့အသံဖိုင်အားလုံးကို offline နားဆင်နိုင်ပါတယ်. သဒ္ဒါဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက် Unit (အခန်း) ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ထည့်ထားလို့သဒ္ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဂဃနဏ လေ့လာနိုင်ပါတယ်...APK ဖိုင်ကနည်းနည်းကြီးပါတယ်..ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသံဖိုင်ကို Offlineထည့်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်.. Cambridge Essential Grammar in Useကိုဘာစာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်..UI ရှင်းလင်းပြီးသုံးရလွယ်ကူတဲ့ appတစ်ခုဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ်..
၁၃ချပ် - အခမဲ့ဂိမ်းအသစ် 1.0.0.24 APK
၁၃ချပ်သည် ကစားသူ၏ ကိုယ်ဥာဏ်ကို စမ်းသပ်သည်။ ၁၃ချပ်ဂိမ်း၏ သော့ချက်ကကိုယ့်လက်ထဲတွင် ၁၃ချပ်ဖဲကို ရှိတဲ့အချိန် တွင်အကောင်းဆုံးဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ အမှတ်အမြင့်ရလျှင်ဆုပိုများရ သည်။ဆယ့်သုံးချပ်သည် Google Playတွင် အကာင်းဆုံးဖဲမျိုးဂိမ်းဖြစ် သည်။ဂိမ်းကစားနည်းလမ်း။ ။ ဖဲ၅၂ချပ်ရှိ၊ လူ၂-၄ ယောက်ဂိမ်းထဲဝင်လာ၊ကစားသူတိုင်းသည်ဖဲ ၁၃ချပ်ယူ၊ ကစားသူသည် လက်ထဲ၏ဖဲ ၁၃ ချပ်ကို၃ချပ်(ပထမတန်း)၊ ၅ချပ်(ဒုတိယတန်း)၊ ၅ချပ်(တတိယတန်း)သုံးတန်းခွဲခြားလိုသည်။ ပထမတန်းသည် ဒုတိယတန်းကိုငယ်ရမည်ဖြစ် သည်၊ဒုတိယတန်းသည် တတိယတန်းကို ငယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပထမတန်း၊ ဒုတိယတန်း၊တတိယတန်း အစီအစဉ်အလိုက် တခြား ကစားသူနှင့်ပြိုင်ယှဉ်သည်။၁၃ချပ်၏ထူးခြားချက် ၁၃ချပ်သည် အရှေ့တောင်အာရှရေပန်းစားလာသော ဖဲဂိမ်းဖြစ်သည်။ သင်ကကစားစမ်းကြည့်ချင်သလား။ ကစားလျှင်အမြဲနိုင်အောင်ရမည်။ဒေါင်းလုပ်အခမဲ့၊ မှတ်ပုံတင်မလို၊ နေ့စဉ်ကစားအခမဲ့။အခန်းအများကြီးရွေးနိုင်ရမည်။ လူစိမ်းအခန်း၊ သီးခြားအခန်း၊ပြိုင်ပွဲအခန်း၊ မင်းက စွမ်းရည်အထူးထက်မြက်သူနှင့်အတူပြိုင်ယှဉ်ရ သည်။Fbနှင့်ခရည်းသည်အကောင့်ဝင်၊ ပိုအဆင်ပြေသည်။ ပါဝငျ အန်စာ ကိုးမြီးဖဲပြိုင်ယှဥ အခမဲ့လက်ဆောင်အများကြီးလက်ခံနိုင်ရမည်၊ကစားလျှင်စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ကောင်းပါသည်။ မြန်မာ့ ၁၃ကတ်ပိုကာမှာရွှေရန်မှထုတ်သော မြန်မာ့ လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများ၌တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။အင်တာနက်ဖုန်းဖြင်အချိန်နေရာမရွှေးပြန်၍ရှုံးကြွေးဆပ်နိုင်သောဂိမ်းများကစားခြင်း။ 3G ၊ ဒေတာကုန်အလွန်သက်သာ။အင်တာနက်မကောင်းလဲချောမွေ့စွာက စားနိုင်ခြင်း။ရိုးရှင်း ၊လွယ်ကူစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဂိမ်းစည်းမျည်းများ။အဆင့်မြင့်ကစားသမားများနှင့်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များ။သင့်မိတ်ဆွေ This game is intended for adultaudiences and does not offer real money gambling or anyopportunities to win real money or prizes. Success within this freepoker game does not imply future success at real money gambling. 13slices of his own intelligence test. 13 slices slices hands the keyof the game just 13 formed in the vicinity. The height, the higheraward. Thirteen slices on Google Play for Best Card Game. How to play the game. . Silk, 52 slices Which comes ina 2-4 game, The players stack the slices 13, Player card in thehands of the 13 slices3slices (First Class)5slices (second) 5(third) is divided into three slices. First, second, it must besmall The second is to be the third. First Class, second, The thirdprogram compete with other players based on competition. 13 slices of distinction 13 slices werepopular in Southeast Asia Card Game. If you want to try playing. Ifyou play will always be so. Download Free RegistrationDaily free play. Can choosealot of room. Byastrangeroom, A separate room, Racing, The ability to compete with talentedracing. Fb and aim for the account, The moreconvenient. Vomit includes nine grass silk ယှဥ must beable to receivealot of free gifts, If interested in playing sogood. Myanmar 13 gold cards How to Myanmar one of the most populargame in the 0. Internet phone certainly not playing games againfail to pay ransom. 3G, I feel very comfortable. Internet dataseamlessly simplicity. Easy and interesting game rules. Newchallenge for advanced players with your friends. This game isintended for adult audiences and does not offer real money gamblingor any opportunities to win real money or prizes. Success withinthis free poker game does not imply future success at real moneygambling.
နည်းလမ်းများ 1.0 APK
ဒီဆော့ဝဲလေးမှာ ဖုန်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းပေါင်း (၁၀၀)ကျော်ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုသာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ပုံနှင့်တကွ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာလေ့လာနိုင်အောင် ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ဘာတွေပါလဲသိချင်ရင် Screen Shotပုံတွေမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အားပေးကြပါအုံးခင်ဗျာ။
Wave Money 4.0.8 APK
Welcome to Wave Money! Our app brings ease, comfort and convenienceby giving control of your financial transactions in your hands. Itis simple enough for everyone to use and intuitive enough for youto make Wave Money the only preferred app for handling financialmatters. Send Money to your loved ones everywhere in Myanmar or buyairtime for any Telenor Myanmar number. We will continue to newproducts and services in the app for you, ensuring ease, comfortand security. Wave Money app is available for Telenor customers.For more info please call our helpline: - 900 from any TelenorMyanmar number (free call) - 097 9000 9000 from any other number oremail care@wavemoney.com.mm
ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန် 1.0 APK
လစဉ် လတိုင်း ထီပေါက်စဉ်တင်ပေးနေတဲ့ လူသုံးများတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။ကျပ်သိန်း (၁) သောင်း ထီပေါက်စဉ် နှင့် အခြားဆုကြီးများစွာကိုဒီဆော့ဝဲကနေရင်ခုန်စွာဖြင့် ကြည့်နိုင်ပါပြီ။ထီပေါက်စဉ်တိုတ်ရိုတ်ကြည့်နိုင်မယ့် ရုပ်သံလိုင်းပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံးကို ထီဖွင့်ပွဲ စတာနဲ့ထီစတိုက်လို့ ရပါပြီ။မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထီတိုက်ချင်သူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါပြီ။
ဒေါက်တာအရှင်ဉာဏိဿရ(သီတဂူ)တရားတော် အပိုင်း-၁ 1.0 APK
ဒေါက်တာအရှင်ဉာဏိဿရ(သီတဂူ)ဆရာတော်ဘုရား၏တရားတော်များ အပိုင်း ၁၁။ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ ၂။ မိတ်ကောင်းနှင့်စိတ်ကောင်း၃။ဧကရာဇ်မင်းကြီး၏ဘဝနိဂုံး ၄။ စူဠပန္ထကဝတ္ထု ၅။ ကောင်းမှုကိုအထင်မသေးနဲ့၆။အသူရာတိုက်ပွဲ ၇။ စိတ်ထိန်းတရားတော် ၈။ မေတ္တာစွမ်းရည်၉။ဘဝပြည့်စုံခြင်း၏အခြေခံအကြောင်းတရား ၁၀။ စိတ်ရိုင်းကိုပြင်Dr.အရှငျဉာဏိဿရ (timing) ဆရာတျောဘုရား၏ Lecture Part 1 1. Whytroublecan happen 2. Friendships, good luck 3. Emperor's End 4. Thedeedincorporating ပန္ထတ္ထု 5. Good အထငျမသေးနဲ့ 6. Fall တိုက် 7.Controllaw 8. ability to love 9. The basis of the fullness of life10. Thewild
မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်ကို မိတ်ဆွေတို့ Android Phone ပေါ်ကနေ အလွယ်တကူနာကြားရွတ်ဖတ်ပူဇော် နိုင်စေရန် ရေးသားထားသော App ဖြစ်ပါသည်။သာသနာတော်ကိုအကျိုးပြုနိုင်မယ့် ဒကာတော်ကောင်း ဒကာတော်မြတ်တို့ဖြစ်ကြပါစေ။Friends Hello, Buddhist decidinghttp://www.visionrevision.org wipe(11) If from the Android PhoneEasy to read between To be able tooffer App written. That willbenefit သာသနာတျောကို Terms andconditions apply Terms and conditionsapply are precious.
TTA MI Myanmar Font 9.5 to 10 21419 APK
Can Install Myanmar Font MIUI 9.5 to 10 Easy Install Myanmar FontMi Phones How to Change in "Help" button
သမ္ဗု​ဒ္ဓေ (၅) မျိုး 1.0 APK
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် သမ္ဗု​ဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကို အလွယ်တကူနာကြားရွတ်ဖတ်ပူဇော် နိုင်စေရန် ရေးသားထားသော App ဖြစ်ပါသည်။သာသနာတော်အတွက်အကျိုးပြုနိုင်သော ဒကာတော်ကောင်း ဒကာတော်မြတ် တို့ဖြစ်ကြပါစေ။